Prashant - KathaHamro
प्रशान्त Chapter 3
इङ्गलिस लिट्रेचरको क्लासमा ‘ड सेकेन्ड सेक्स’ पढाई भईरहेको थियो । फोन बज्यो । कक्षामा उपस्थित सबैले मतिर हेरे । अनुहार रातोपिरो भयो । मानौ क्याम्पसको ए स्टान्डर्ड स्टुडेन्टले अनुशासन तोडेको थियो । म कक्षाकोठाबाट बाहिर निस्किएँ ।
कल ब्याक गरेँ । फोन उठेन । ट्राइ गरिरहे । उसको कोठा छेउ पुगे । बिमला क्याम्पस नजिकै बस्थिन् । मैले फेरि कल गरे । फोन रिङको आवाज सुनियो । ‘भित्र आउ ।’
पर्दा हटाए ढोका त खुल्लै रहेछ । कोठाको बायाँपट्टि खाट थियो । दायाँतर्फ किचेनको केही सामानहरु भुईमै ठन्काइएका थिए । लुगाकपडा जताततै छरिएका थिए । साइडमा कालो रङ्गको हेल्मेट देखे । म झस्किएँ ।
‘कतै त्यहि केटा त हैन ।’ मनमा चस्क्क पर्यो ।
‘बस न ।’
‘किन फोन गरेको ? अनि कल रिसिभ पनि गरेनौ ?’
एकजना केटा हरियो रुमालले हातमुख पुछ्दै ढोकाबाट छिर्यो । लगभग ५ फिट १० इन्चको, गहुँगोरो, चिम्से आँखा, चुच्चो नाक र खैरो ओठ । झट्ट हेर्दा बाहुन जस्तै लाग्यो । निलो रङ्गको चेक सर्ट, रफ जिन्स र कालो जुत्ता नफुकाली भित्र पस्यो । पावरवाला चस्मापनि लगाएको थियो । सायद उसको आँखा सारै कमजोर थियो । ऊ बिमलाको छेउ गई बस्यो । उसको हत्केला समायो । अंकमाल गर्यो । निधारमा किस् दियो ।
‘बधाई छ । साझँको इभेन्टमा सो स्टपर तिमी फिक्स भयौ । भर्खर अर्गनाइजरसँग कुरा गरे । अब तिमीलाई यो इभेन्टपछि अरुपनि अफर आउनेछन् ।’
‘हेर्, वाह त्जबलप थयग , प्रशान्त ।’ एक्साइटमेन्टमा बिमलाले त्यो केटालाई किस गरी । मैले नदेखे झै गरे ।
‘ओके, डेन सि यु इन् ड इभिनिङ्ग ।’ केटाले बिमलालाई नजिक तान्यो ।
म जुरुक्क उठे । मलाई धेरै रिस उठेको थियो । उसले मलाई सधै यस्तै गर्छे भन्ने लाग्यो । मलाई चित्त नबुझेको कुरा म प्राय भनी हाल्ने गर्छु तर बिमलाको पक्षमा म किन फरक छु ? उसलाई केही भन्नु अघि दसचोटि सोच्छु । बिमलाले मतिर फर्केर बस भनी मेरो हात समायो । म लसुक्क बसेँ । ‘ऊ प्रशान्त हो । मेरो बोइफ्रेन्ड । मोडलिङ्ग इभेन्ट म्यानेज गर्छ ।’
‘हाई , प्र.........शान्त ।’
कसरी शान्त हुनु ? मेरो मनमा त भुकम्प आइरहेको थियो । केहीदिन अघि मात्र त एक्स भनेर अर्को केटा चिनाएकी थिई । कति छिटो नयाँ पार्टी भेटी सकेछ । सायद उसको प्रोफेसन नै त्यस्तै छ । उनीहरुको प्राइभेसी रुन् गर्न चाहिँन र म निस्के ।
‘पख है, मपनि आउँछु ।’ बिमलाले भनी ।
‘म क्लास लिन जादैँछु ।’
‘मेरो पनि म्युजिक क्लास जानु छ ।’
‘ए, हो । तिम्रो त यहीँ क्लास चलिरहेको छ । हैन र ? उताको क्लास नि भ्याउछौ ?’
‘अँ, भ्याइदिन्छु । क्षेत्रीकी छोरी हुँ । चारैतिर भ्याउँछु ।’
बिमलाले ढोकामा चाबी लगाई । म अगाडि हिडेँ । ठट्टा गर्दै उनीहरु क्याम्पस गेटसम्म पुगे ।
‘यहाँ बाहिरको स्टुडेन्ट अलाउड छैन ।’ मैले त्यैबाट केटालाई पठाउन खोजे ।
‘कता लेखेको छ ?’ बिमलाले यताउता हेरी ।
‘यो रुल हो ।’ मैले जोड दिए ।
‘रुल भनेको तोड्नलाई बनाइन्छ । तैमाथि यो सरकारी क्याम्पस हो । त्यस्तो वास्ता हुन्न ।’ प्रशान्त चर्केर बोल्यो । बिमला हासी ।
मैले भने, ‘सरकारी क्यापस भएपनि अनुशासन त सबै ठाउँमा एउटै हो ।’
ती दुई मेरो कुरा सुन्दै नसुने जसरी क्याम्पस परिसरमा हातमाहात राखी अघि बढे । म भने बिहेमा जन्ती गएजस्तो पछिपछि परँे ।
अब यसरी जिन्दगी चलदैन भन्ने लाग्यो र म सरासर पत्रकारिता हलतिर लागे ।
बाई भन्न जरुरी पनि लागेन ।
‘सुन त....... ।’
उनले आवाज दिइन् । मलाई फर्केर हेर्न पटक्कै मन थिएन । तर उसको माया लाग्यो । आखिर ऊ खुसी छे । त्यसमै म खुसी भइदिएँ । उतिर हेरे ।
‘दिउसो सपिङ्ग जाने है । तिम्रो चोइस् राम्रो लाग्छ ।’
‘आज अफिसमा धेरै काम छ । सरी, म्यानेज गर न ल ।’
‘त्यसो भए साँझ इभेन्टमा आऊ ।’
‘उज्यालो किरणहरु रहेपनि अध्यारो हुने त्यो ठाँउमा मेरो उपस्थिति पनि फिक्का हुनेछ । यस्तोमा मेरो के अर्थ रहन्छ र ? तिम्रो काम सफल होस् । शुभकामना ।’
म आफ्नो बाटो लागे । त्यसपछि फर्केरपनि हेरिन । उनलाई कन्ट्याक लिस्टबाट नि हटाए । केहीदिन पछि एकजना केटीले मसँग उसको नम्बर मागी । उनी धेरैदिनदेखि क्यापस नआएको थाहा दियो । उसको म्युजिक क्लासको साथीहरुलाई पनि ऊ बारे केही जानकारी थिएन । म उसको डेरामा नि गए तर त्यहाँबाट केही पट्टा लागेन । बिमला कहाँ गई कता हराई आखिर के भएछ केही जानकारी हात लागेन । बस मेरो आँखामा अन्तिम पटक उसलाई प्रशान्तसँग नजिक भएको छाप थियो । दिन बित्दै गयो । उसको कतैबाट खबर आएन । यतिकैमा जाडो बिदापनि सुरु भयो ।
The Art of You & the Art of Me New Normal